အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ပါ
၂၀၁၅ မှာ သမ္မတအဖြစ် ဘယ်သူ့ကို မဲပေးကြမလဲ
"Facebook ပေါ်မှာ သတင်းတွေအလွယ်တကူဖတ်ဖို့ ညာဘက်နားလေးက New Myanmar News Facebook စာမျက်နှာလေးကို Like လေးလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲကနေ တစ်ဆင့် ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အခမဲ့ သတင်း Application လေးကို ညာဘက်နားလေးမှာ အလွယ်တကူ Download ရယူနိုင်ပါတယ်"
ဒီမှာ Follow ပါ
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှဖတ်ရန်စာ
ဆေးဝါးအသစ် သုတေသနများမှာ ပါဝင် အစမ်းသပ်ခံသင့်သလား
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရေတပ် က ရေငုပ်သင်္ဘောနှစ်စင်းကို ယခုနှစ်အတွင်း တပ်တော်သွင်းမည်
အီတလီမှာ အငျအားပွငျးငလငျြ ၂ ခု လှုပျခတျခဲ့
လွဏ်းဆွေ - အိပ်မပျော်သော ညများ
လည်ပင်းကို သုံးပေလောက်ရှိသည့် သံချောင်းနှစ်ချောင်း ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ကံကောင်းစွာ အသက်ရှင် ကျန်ရစ်ခဲ့သူက အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဟာမာဆင်းရာပက် ဖြစ်သည်။ အသက်(၂၆)နှစ် အရွယ်ရှိ ရာပက်သည် စက်ဘီးစီးနင်းလာစဉ် အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ သယ်ဆောင်လာသော ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး၊ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးနှင့် ကြုံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ အလွန်အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်ခဲ့သလို တုန်လှုပ်စရာလည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရာပက်သည် စက်ဘီးဖြင့် ကုန်တင်ကားကို ၀င်ဆောင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရာပက်က သံချောင်းနှစ်ချောင်းသည် မိမိ၏ လည်ပင်းကို ထိုးဖောက် ၀င်ရောက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ကုန်တင်ကားကို ၀င်ရောက် ဆောင့်မိခြင်းကြောင့် ဆိုးရွားသည့် ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီဟု ထင်မိခဲ့ကြောင်း၊ မိမိ၏ အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီဟု စိတ်ထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် စက်ဘီးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း မရှိခြင်းကို နားမလည်မိကြောင်း၊ မိမိ၏ လူပ်ရှားမှုများသည် သေခြင်းကို ဖိတ်ခေါ်သလို ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဟြေကြားခဲ့သည်။ မျက်မြင်သက်သေများက ရာပက်သည် အခင်းဖြစ်ပြီးနောက် သွေးအိုင်ထဲတွင် လဲနေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နီးစပ်ရာဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။ ရာပက်ကို ခွဲစိတ်ပေးခဲ့သည့် ဆရာဝန် ချာဟာပါဝါလ်က မိမိတို့ဆေးရုံကို ရောက်ရှိလာရာတွင် သံချောင်းက လည်ပင်းကို ထုတ်ချင်း ဖောက်နေသောကြောင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့ကြောင်း၊ သံချောင်းသည် လည်ပင်းကို ဖောက်ပြီး ကျောပြင်ကို ထိုးထွက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ရာပက်သည် မခွဲစိတ်မီ စကားလည်း ပြောနိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် အံ့အားသင့်ခဲ့ရကြောင်း ဟြေကြားခဲ့သည်။ ရာပက်ကို ခွဲစိတ်ရာတွင် အချိန်သုံးနာရီ ယူခဲ့ရသည်။ ရာပက်သည် ဒဏ်ရာရစဉ်တွင် အဓိက သွေးလွှတ်ကြောများ ထိခိုက်ခြင်း မရှိသောကြောင့် အသက်ရှင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရာပက်သည် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်သားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ယခုအခါ နေအိမ်သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ရာပက်က မိမိကို ဆရာဝန်က အခင်းဖြစ်စဉ်က ဓာတ်ပုံများကို ပြသခဲ့ကြောင်း၊ မိမိအနေဖြင့် ကံကောင်းလွန်းလို့ အသက်ရှင်ခွင့် ရခဲ့သာဖြစ်ကြောင်း ဟြေကြားခဲ့သည်။
Read 4295 times	မေတ္တာတွေ ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လမင်းအိနြေ္ဒ
အကယ်ဒမီ ဗန်းကိုင်ကနေ အနုပညာ လောကထဲကို ခြေချခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်သစ် လမင်းအိနြေ္ဒက သူမအတွက် သရုပ်ဆောင် န၀ရတ်ဆီကနေ ညီအစ်မ မေတ္တာတွေ ရခဲ့တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ညီမနဲ့ မန၀ရတ်တို့က ရုပ်ရှင်ကားကို မလေးရှားမှာ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အကြောင်း ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပေါ့နော်။ မလေးရှားမှာ မလေးက ဒါရိုက်တာတွေနဲ့ ရိုက်ရတော့ သူတို့က အချိန်ကိုတိကျတယ်။ အစောကြီး ရူတင်ကိုသွားရတယ်။ အစစ အရာရာ သူ့အချိန်နဲ့သူ အကုန်လုပ်ရတယ်။ မနားမနေ ရိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ အက်ရှင်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ တကယ့်ကို စိတ်သွင်းပြီး လုပ်ရတယ်။ တကယ့်အိုက်တင် မရမချင်းကို မဖြုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရိုက်တော့မြန်တယ်။ စိတ်ကို တကယ်သွင်းလို့ ရပြီဆိုရင် ရိုက်တဲ့အခန်းကလည်း အောင်မြင်သွားတယ်။ ထပ်ခါ ထပ်ခါ မလုပ်ရဘူး။ အချိန်လည်း မကုန်ဘူး။ လူလည်း သိပ်မပင်ပန်းဘူး။ တစ်ကားလုံးမှာ ညီမအတွက် အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပညာတွေလည်းရတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အစ်မ မန၀ရတ်ဆီက ပညာလည်းရတယ်။ မေတ္တာလည်းရတယ်။ အဲဒါကြောင့် အစ်မကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ညီမကို အသစ်အနေနဲ့ တွဲရိုက်တယ်၊ ခေါ်ရိုက်တယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာတင် ညီမအရင်းလို မေတ္တာပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ အပြင်မှာလည်း မေတ္တာပေးတယ်။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိကို အဲဒါကြောင့် အစ်မန၀ရတ်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုနိုင်နိုင်း၊ အန်တီဝါ၀ါအောင်၊ ကိုဇော်ဇော်အောင်တို့ကလည်း သင်ပေးတယ်။ ညီမကိုလည်း ကာရိုက်တာပိုင်းတွေကို ပြောပြတယ်။ ဒါရိုက်တာကလည်း ညီမနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတယ်။ သူက ဘယ်လိုအပိုင်းတွေကို လိုချင်တယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။ အများကြီးလည်း ကူညီပေးတယ်”လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင် လမင်းအိနြေ္ဒအတွက် မှတ်မှတ်ထင်ထင် ပထမဦးဆုံး ရုံတင်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ “မဟာဆန်တဲ့ မာယာမျက်နှာဖုံး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ လက်ရှိမှာ ရုံတင်ပြသနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Read 4295 times	သရုပ်ဆောင်မှုနဲ့ အသားကျလာပြီ ပြောတဲ့ ရတနာဗို
အနုပညာပျိုးခင်း(၂)ရဲ့ မင်းသမီး တစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရတနာဗိုက သရုပ်ဆောင်မှု အပိုင်းနဲ့ အသားကျလာပြီလို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ “ညီမအတွက် အခုချိန်ထိကို ဆရာတွေက သင်ပေးနေဆဲပါ။ ဇာတ်ကား တစ်ကားမှာ မတူအောင် ဗဟုသုတတွေ၊ အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ အရည်အချင်းတွေရော ဆရာတွေက သင်ကြားပေးတော့ လေ့လာခွင့်ရပါတယ်။ ညီမကို လာငှားတဲ့ ဇာတ်တွေကလည်း ညီမနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တယ်ထင်လို့ လာကြတယ်ပေါနေ့ာ်။ ညီမ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဇာတ်ညွှန်းရလာရင် အိမ်မှာလည်း လေ့ကျင့်တယ်။ ရိုက်ကွင်းပေါ် ရောက်ရင်လည်း ညီမကို သင်ပေးကြတယ်။ လက်တွဲ ကူညီကြပါတယ်။ ညီမအနေနဲ့လည်း ဒီလောကထဲကို အစိမ်းသက်သက် ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့လည်း ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်လာရပြီ ဆိုတော့ အရင်ကထက် စာရင်တော့ အသားကျနေပြီလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဗီဒီယိုကားက (၁၇) ကားလောက် ရိုက်ပြီးသွားပါပြီ။ ရုပ်ရှင်ကားကတော့ ရိုက်ထားတာက တစ်ကားပဲ ရှိပါသေးတယ်။ “ဘောစိ”ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါ။ ညီမ ရိုက်ထားတာကလည်း ဒရာမာတွေ၊ ဖန်စီတွေများတယ်။ တချို့ကတော့ ထွက်ပြီ၊ တချို့ကတော့ မထွက်သေးဘူး။ ညီမအတွက်ကတော့ ဒရာမာရိုက်တာ နည်းတယ်။ ညီမကလည်း ဒရာမာကိုလည်း အားသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ခုချိန်တော့ ညီမအတွက်က အရာရာ အားလုံးက အသစ်တွေပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ၀ါနုတော့ အများကြီး သင်ယူ လေ့လာရဦးမှာပါ။ ညီမ မလုပ်ဘူးတဲ့ ကာရိုက်တာတွေကိုလည်း ကြိုးစားပြီး လုပ်ပါမယ်”လို့ ရတနာဗိုက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ရတနာဗိုက လက်ရှိမှာတော့ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်နဲ့ အတူ “ဗလရဲ့ဇ” ဗီဒီယို ဇာတ်ကားကို ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Read 4295 times	နှုတ်ခမ်းချင်းအနမ်းပေးသူများကြုံနိုင်သည့် အာဘွား ဘက်တီးရီးယား
နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းသည့်အခါ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘက်တီးရီးယားမည်မျှ ကူးစက်နိုင်သနည်း။ နယ်သာလန်မှ သုတေသီများသည် ချစ်သူစုံတွဲ (၂၁) တွဲကို အကူအညီ တောင်းကာ စမ်းသပ် ကြည့်ခဲ့သည်။ စုံတွဲများအနက် တစ်ယောက်ကို အန္တရာယ် မဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများ ထည့်သွင်းထားသော ဒိန်ချဉ်တိုက်သည်။ ထိုဒိန်ချဉ်သောက်ပြီးနောက် မိမိ၏ ချစ်သူနဲ့ (၁၀) စက္ကန့် ကြာအောင် နှုတ်ခမ်းချင်း နမ်းစေသည်။ ထိုအခါ ဒိန်ချဉ် သောက်ထားသူထံမှ ဘက်တီးရီးယား သန်း (၈၀) ၀န်းကျင် ချစ်သူ၏ ပါးစပ်ထဲသို့ ရောက်သွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သိပ်များသည်ဟု ထင်ပါသလား။ ထိုနှုန်းသည် ပုံမှန်နှုန်းလောက်သာ ရှိသောကြောင့် ကြောက်လန့် နေရန်မလို။ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အဆိုအရ လူသည် အခြားသူများ၏ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ ပုံမှန်လိုလို ထိတွေ့နေပါမှ ကိုယ်ခံအားစနစ်သည် ဘက်တီးရီးယားများနဲ့ ယဉ်ပါးကာ ဘက်တီးရီးယားဒဏ် ခံနိုင်သွားကြောင်း သိရသည်။ လူတွေနဲ့ ကင်းကွာကာ သီးသန့် အနေများ သူတို့သည် လူကြားထဲ ရောမိလျှင် မကျန်းမမာ ဖြစ်တတ်သည်မှာ ၎င်း၏ ကိုယ်ခံအား စနစ်သည် အခြား ဘက်တီးရီးယားများနှင့် စိမ်းသဖြင့် ထိုဘက်တီးရီးယားများကို မည်သို့ ခုခံရမှန်းမသိ ဖြစ်ကာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
Read 4295 times	မဲတံဆိပ်တုံး အသုံးပြုရာတွင် မင်ယိုစိမ့်လျှင်လည်း ပယ်မဲမဖြစ်ဟု တာဝန်ရှိသူများပြော
ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခွင့်ရထားသော ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်အရ မဲမည်သို့ပေးရမည်ကို အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်က မဲပေးသူပညာပေးပြသပေးနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ − စိုးဇေယျာထွန်း/ရိုက်တာ)
ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးရာ တွင် အမှန်ခြစ် မဲတံဆိပ်တုံး နှိပ်ရာ၌ မဲလက်မှတ်တွင် မင် ယိုစိမ့်မှုရှိသွားလျှင်လည်း ပယ်မဲ မဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံ ဒေါက် တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြောသည်။‘‘တံဆိပ်တုံးတွေက ယူအီးစီ က ထုတ်ပေးထားတာတွေဖြစ် တယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ တစ်ခါ ပဲထုလို့ မင်ယိုစိမ့်မှုဖြစ်သွားခဲ့ရင် ပယ်မဲမဖြစ်ပါဘူး။ နှစ်ခါထပ်ထု တာမျိုးတော့ မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ပြီးတော့ မဲရုံတွေကိုလည်း အ ကြောင်းကြားထားတယ်။ မဲမပေး ခင် တခြားစာရွက်တစ်ခုမှာ ခုနစ် ခါ၊ ရှစ်ခါလောက် တံဆိပ်တုံးကို အစမ်းထုထားခိုင်းတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရင် မင်ယိုစိမ့်မှုမရှိတော့တာ ကို တွေ့ရတယ်’’ဟု ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြောသည်။အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်မှ စတင်ကာ ကြိုတင်မဲများ ရယူမှု များတွင် UEC တံဆိပ်တုံးများ အသုံးပြုရာ၌ မင်ယိုစိမ့်မှုများရှိခဲ့ ကြောင်း ပြည်ခရိုင် အတွင်းရှိ ရပ်/ကျေး ကော်မရှင်၊ ပါတီကိုယ် စားလှယ်များမှ တင်ပြမှုများရှိခဲ့ သောကြောင့် ယင်းတင်ပြမှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်က ပြည်မြို့၊ ခေတ္တရာ ခန်းမတွင် မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ ခွဲများနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ ဒေါက် တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။မဲပေးရာတွင် အသုံးပြုသည့် တံဆိပ်တုံးသည် မင်ယိုစိမ့်မှုမရှိ ကြောင်းနှင့် အကယ်၍ ဆန္ဒမဲပေး နေစဉ် မင်ယိုစိမ့်ခဲ့ပါက ပယ်မဲမ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်ဦး ၀င်းကြည်က ပြောသည်။‘‘မင်ယိုစိမ့်တာကတော့ မ ဖြစ်သလောက်ပါပဲ။ ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို ရင်လည်း နှစ်ကြိမ် မနှိပ်မိဖို့ဘဲလိုတာ။ နှစ်ကြိမ်မနှိပ်ရင် မင်ယို လည်း ပယ်မဲမဖြစ်ဘူး’’ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်မှ စတင်၍ ကြိုတင်မဲရယူမှုများ တွင် အချို့သော ရပ်/ကျေး ကော် မရှင်များက အမှန်ခြစ် မဲပေးခြင်းသာသိရှိပြီး တံဆိပ်တုံးဖြင့် မဲပေးရမည်ကို မသိရှိခြင်းကြောင့် မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ အနေဖြင့် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများအထိ သိရှိနားလည်ရန် ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြောကြားခဲ့သည်။‘‘ကျွန်မကိုယ်တိုင်ကို တွေ့ခဲ့ တာ။ ရပ်ကွက်ကော်မရှင်ရုံးခွဲက ကို အမှန်ခြစ်ရမယ်ဆိုပြီးလုပ်တာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုမျိုး မသိတာဟာ အားနည်းချက်ပါပဲ။ ဒါ ကြောင့် မြို့နယ်ကော်မရှင်များအနေနဲ့ ကိုယ့်ရပ်/ကျေးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေအထိ သိအောင် ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေး ကြပါ’’ ဟု ပြည်ခရိုင်ရှိ မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများအား ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်ကြည်က ပြောကြားသည်။ဆန္ဒပြုရမည့် တံဆိပ်တုံး ကြောင့် မဲလက်မှတ်တွင် မင်မစွန်း စေရန် မင်ခံခွက်(Ink Pad)နှင့် နှိပ်ရသည့် တံဆိပ်တုံးအစား မင်အမြန်ခြောက်လွယ်သော လေဆာတံဆိပ်နှင့် ဆန္ဒပြုရန် စီစဉ်ထားပြီးအကြိမ်ပေါင်း ငါးထောင်ရိုက်နှိပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ တံဆိပ်တုံးကို ပြည်တွင်းတွင် UEC က တာဝန်ယူစီစဉ်ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကာ အသုံးပြုမည့်မင်ကိုသာပြည်ပမှတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ မဲရုံများ၌ အသုံးပြုရန် ရပ်/ကျေးရွေးကောက်ပွဲကော်မ ရှင် အဖွဲ့ခွဲများထံသို့ ပေးပို့ထား သည့် UEC တံဆိပ်တုံးများကို အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်မှစ၍ ကြိုတင်မဲရယူမှုများတွင် အသုံးပြု ရာမင်ယိုစိမ့်နေမှုများ တွေ့ရှိရ ကြောင်း ရပ်/ကျေးကော်မရှင် တာဝန်ကျ ပါတီကိုယ်စားလှယ် များက တင်ပြလာ၍ အချိန်မီပြု ပြင်ပေးရန် ပြည်ခရိုင် ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံသို့ ပြည်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့ကအောက် တိုဘာ ၃၀ ရက်ကတင်ပြခဲ့သည်။ ထိုသို့တင်ပြခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့ တွင် တာဝန်ရှိသူများက အထက် ပါအတိုင်း ရှင်းလင်းကြခြင်းဖြစ် သည်။
Read 4295 times	လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှု မျိုးဗီဇနှင့် ဆိုင်ပါတယ်တဲ့
လူမှုရေး ဖောက်ပြန်သူများကို အပြစ်မတင်ဘဲ ယင်းဖောက်ပြန်သူ များ၏ မျိုးဗီဇကိုသာ အပြစ်တင်ပါဟု လိမ်လည်မှု သိပ္ပံအမည် ရှိသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကို ယူကျုရှိ သိပ္ပံပညာ ဆိုင်ရာ ရုပ်သံလိုင်း AsapScience မှ မစ်ချဲ မော့ဖစ်နှင့် ဂရီဂေါ်ရီ ဘရောင်းတို့က ထုတ်လုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသားများ အပါအ၀င် နို့တိုက်သတ္တ၀ါများ အနက် သုံးရာခိုင်နှုန်းသာ မိတ်ဖက် တစ်ဦးတည်းနှင့်သာ နေတတ်ကြောင်း ဗီဒီယိုဖိုင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဦးနှောက်တွင်းရှိ ဒိုဖာမင်း ရီဆက်တာသည် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်း၊ စားသောက်ခြင်းနှင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ ပြီးနောက်တွင် အရသာ ရှိသည်ဆိုသည့် ခံစားချက်ကို ဖြစ်စေသော ဟိုမုန်းကို ထုတ်ပေး တတ်သည်။ ယင်းနေရာရှိ ရှည်လျားသော မျိုးဗီဇပုံစံကို ပိုင်ဆိုင်သူများသည် လူမှုရေး ဖောက်ပြန်တတ်ပြီး တိုသောမျိုးဗီဇပုံစံ ကိုပိုင်ဆိုင်သူများသည် ဖောက်ပြန်နိုင်ခြေ များကြောင်း လေ့လာမှု တစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသးည်ဟု မော့ဖစ်နှင့် ဘရောင်းတို့က ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဗတ်ဆိုပရက်ဆင် ဟိုမုန်းနှင့် လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှု များကြားလည်း ဆက်စပ်နေ ပြန်သည်။ ယင်းဟိုမုန်းသည် ယုံကြည်မှု၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နှင့် လူမှုရေးအရ ငြိတွယ်မှုများအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနေသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာမှု တစ်ခုတွင် ဗတ်ဆိုပရက်ဆင် ဟိုမုန်း နည်းပါးသူများသည် လူမှုရေး ဖောက်ပြန်တတ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အခြား လေ့လာမှု တစ်ခုတွင်လည်း မိတ်လိုက်ဖက် များသော ကြွက်များအား ဗတ်ဆိုပရက်ဆင် ဟိုမုန်းများ ထိုးပေးခဲ့ရာ ၄င်းကြွက်များသည် မိတ်လိုက်ဖက် တစ်ကောင်ကိုသာ နှစ်သက်တော့ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ခဲ့သည်။ Source:DM
Read 4295 times	လိင်အသားပေး စာအုပ်ကို ကလေးတွေအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း လုပ်မိလို့ ပြန်လိုက်သိမ်းနေရ
ချီလီ အစိုးရသည် လိင်အသားပေး ကလေးစာအုပ် Little Red Riding Hood ကို ကျောင်းတွေကနေ ပြန်လိုက် သိမ်းနေကြောင်း သိရသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ကျောင်းသုံးစာအုပ် အဖြစ် မှားယွင်းကာ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်အတွင်း မူလတန်း ကျောင်းပေါင်း (၂၈၃)ကျောင်းကို ဖြန့်ဝေမိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ခေါင်းစဉ် အပြည့်အစုံမှာ Little Red Riding Hood Eats the Wolf ဟူ၍ဖြစ်ပြီး လိင်အသားပေးခန်းများ ပါသောပုံပြင်တို ခြောက်ပုဒ်ပါသည်။ ချီလီ တောင်ပိုင်းရှိ ရီယိုဗျူနိုမြို့မှ ကျောင်းဆရာမ တစ်ဦးက ဦးဆုံးသတိထားမိပြီး ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာနကို အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုစာအုပ်သည် ကိုလမ်ဘီယာ စာရေးဆရာ ပီလာကွင်တားနားက ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ချီလီတွင်လည်း ထိုနှစ်မှာပင် ရောင်းချခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုံပြင်တိုများထဲတွင် တစ်ခုသည် ဆရာနှင့် တပည့်မလေး ချစ်ကြိုက်ကြသည့် အကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုမှာ (၁၃)နှစ်ကျောင်းသူကို အဓမ္မကျင့်သည့် အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ၁၈၁၂ ခုနှစ်က စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သော ဂရင်းညီနောင် ပုံပြင်များထဲတွင် ပါသော Little Red Riding Hood ပုံပြင်များနှင့် မှားယွင်းကာ ပြဋ္ဌာန်းမိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Read 4295 times	ဇနီးတွေသက်ရှည် ကျန်းမာဖို့ ခင်ပွန်းတွေက ဥပုသ်စောင့်ကြတာတဲ့
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဇနီးသည်များ အသက်ရှည် ကျန်းမာစေရေး အတွက် ဥပုသ်စောင့်ပြီး ဆုတောင်း ၀တ်ပြုသည့် ခင်ပွန်းဦးရေ များပြားလာ နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းတွင် ကာရ်ဗာချောက် ဓလေ့အရ အမျိုးသမီးများသည် ခင်ပွန်းများ သက်ရှည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဥပုသ်သီလကို စောင့်ထိန်း တတ်ကြသည်။ သို့သော် ယခုအချိန်တွင်မူ ဇနီးများ သက်ရှည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဥပုသ်သီလ စောင့်ထိန်းသည့် ခင်ပွန်းများလည်း ရှိလာနေပြီဖြစ်သည်။ ရာချစ်နှင့် ပင်ကီချိုပရာတို့သည် ကာရ်ဗာချောက် အတွက် ပြင်ဆင်မှုများကို ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဇနီးဖြစ်သူက ၎င်းအတွက် ဥပုသ်စောင့်ပေး သလို ဇနီး သက်ရှည် ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း ၎င်းက ဥပုသ်စောင့်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ရာချစ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသမီး အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက ခင်ပွန်းများအတွက် ဇနီးများက ဥပုသ်စောင့်ပေးခြင်းသည် အမျိုးသား ကြီးစိုးသော ဓလေ့၏ လက္ခဏာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် ခင်ပွန်းများက ဇနီးများအတွက် ဥပုသ်စောင့်ပေးခြင်း ကိုမူ ကျားမ တန်းတူညီမျှရေး အတွက် အရေးပါသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ် ပြောဆိုခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းတွင်လည်း “ဇနီးအတွက် ဥပုသ်စောင့်ပေးပါ”အမည်ရသည့် လှုပ်ရှားမှုများ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ““ကျွန်မတို့က ယောက်ျားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းပါ၊ ဒါကြောင့် ဥပုသ်စောင့် တာတွေကို အမျိုးသမီးတွေပဲ လုပ်ခဲ့ရတယ်။ (၂၁) ရာစုမှာတော့ အမျိုးသမီးတွေကို တန်းတူ အခွင့်အရေး ပေးချင်တဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေ ရှိလာပါပြီ””ဟု အိန္ဒိယ အမျိုးသမီး ကွန်ဂရက်စ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဆာယိရှိုဗာ အိုဇာက ပြောဆိုခဲ့သည်။Source:CAN
Read 4295 times	မော်ဒယ်တွေကို ဘီကီနီ ၀တ်ခိုင်းပြီး စားပွဲထိုးခိုင်း
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတွေကို ထူးထူးခြားခြား ပြုလုပ် တတ်ကြသည်။ အချို့က ဆွဲဆောင်မှု ရှိအောင် မော်ဒယ်တွေကို အသုံးပြုလေ့ ရှိသည်။ မော်ဒယ်တွေကို အသုံးပြုရာတွင် ထူးထူး ဆန်းဆန်း ဖြစ်အောင် ဘီကီနီ ၀တ်စုံတွေ ၀တ်ဆင် ခိုင်းလေ့ ရှိသည်။ တလောက ပြုလုပ် ခဲ့သည့် ရှောပင်းစင်တာ ဖွင့်ပွဲတွင် တက်ရောက် လာသူတွေကို ဧည့်ခံဖို့ မော်ဒယ်တွေကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ တရုတ်မော်ဒယ်တွေ သာမက နိုင်ငံခြားသား မော်ဒယ်တွေလည်း ပါဝင် ခဲ့သည်။ မော်ဒယ်များသည် ဘီကီနီများကို ၀တ်ဆင်ပြီး စားပွဲထိုး ပုံစံ လုပ်ပေးရခြင်း ဖြစ်သည်။ တက်ရောက်လာသော ဧည်သည့်များ စားသောက်ဖို့ အတွက် ပန်ကန်းပြားတွင် သစ်သီးနှင့် ပာင်းလျာများကို ထည့်ကာ ပို့ဆောင် ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟီနန်ဒေသတွင် ရှိသည့် ပလာဇာ ဖွင့်ပွဲတွင် ယခု ကဲ့သို့ ပြုလုပ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Read 4295 times	နှလုံး အပြင်ဘက် ရောက်နေတဲ့ ကောင်မလေး
ရုရှားနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သည့် အသက် ခြောက်နှစ် အရွယ် ကောင်မလေး တစ်ဦးသည် မွေးရာပါ နှလုံး အပြင်ဘက် ရောက်နေသည့် ရောဂါ ရရှိ နေသောကြောင့် ခွဲစိတ် ကုသမှုများ ပြုလုပ်ရန် ကြိုးစားလျက် ရှိသည်။ ယင်းအခြေအနေသည် ဗြိတိန်တွင် လူတစ်သန်းတွင် တစ်ဦးပင် ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိကြောင်း သိသည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်မလေး၏ ဖြစ်ရပ်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ ကြပြီး အမြန်ဆုံး သက်သာ ကောင်းမွန် စေရန် ဆုတောင်း ပေးနေကြသည်။ ဗာဆာဗီယာ အမည်ရ ကောင်မလေးသည် မွေးရာပါ နှလုံး အပြင်ဘက် ရောက်နေခြင်းကြောင့် ရင်ဘတ်တွင် နှလုံး ထွက်ရှိ နေခြင်းကို သိသာစွာ မြင်တွေ့ ရမည် ဖြစ်သည်။ နှလုံးကို အရေပြားကသာ ဖုံးလွှမ်း ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် နှလုံးသည် နံရိုးအိမ် အတွင်းသာ ရှိရမည် ဖြစ်သော်လည်း ထူးဆန်းစွာ အပြင်သို့ ရောက်ရှိ နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် သာမန် လူများ ကဲ့သို့ သွားလာ လှုပ်ရှား နိုင်သည်။ ဗာဆာဗီယာသည် နှလုံး အပြင်ဘက် ရောက်နေသော်လည်း အက ကခြင်းကို ပြုလုပ် ခဲ့သည်။ အချို့က နှလုံးကို ကာကွယ် ပေးနိုင်သည့် အရာသည် အရေပြားသာ ရှိသောကြောင့် အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သတိ ပေးခဲ့သည်။ ဗာဆာဗီယာ၏ မိခင် ဖြစ်သူသည် သမီးဖြစ်သူ၏ အခြေအနေကို လူမှုကွန်ရက်တွင် အကူအညီ တောင်းခံ ခဲ့သောကြောင့် အမေရိကန်တွင် ခွဲစိတ် ကုသမှု ပြုလုပ်ခွင့် ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ရုရှားမှ အမေရိကန်သို့ မိုင်ပေါင်း ထောင်ပေါင်း များစွာ ခရီးနှင်ပြီး ရောက်ရှိ လာခဲ့သည်။ ဘော်စတွန်ရှိ ကလေး ဆေးရုံတွင် ခွဲစိတ်ရန် စီစဉ် ထားသော်လည်း သွေးပေါင်ချိန် တက်နေသောကြောင့် ခွဲစိတ်မည့် အစီအစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရသည်။ ယင်းနောက် ဆေးရုံကိုလည်း ပြောင်းရွှေ့ ထားသည်။ သွေးပေါင် ကျသည့် နေ့တွင် ခွဲစိတ်မှုများ ပြုလုပ် သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဗာဆာဗီယာ၏ ခွဲစိတ်မှုသည် ရှုပ်ထွေးနိုင်သောကြောင့် အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ် ရဖွယ် ရှိသည်။ ဗာဆာဗီယာသည် ချစ်စရာ ကလေးငယ် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ပန်းချီ ဆွဲခြင်း ကိုလည်း ၀ါသနာပါသူ ဖြစ်သည်။ ဗာဆာဗီယာက မိမိသည် ကျောင်းကို မသွားရကြောင်း၊ ထို့ပြင် အရာရာကို သတိထား နေရကြောင်း၊ အိမ်တွင်သာ အနေများကြောင်း၊ မိမိ၏ မိခင်ဖြစ်သူက နှလုံးကို ကိုင်တွယ်ရသည်ကို သဘောကျ နေကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။ လူမှုကွန်ရက်များတွင်တော့ ဗာဆာဗီယာ အမြန်ဆုံး ကျန်းမာလာဖို့ ဆုတောင်း နေကြသည်။
Read 4295 times	နံရံနောက်ပုန်းနေလည်း ထိအောင် ပစ်နိုင်သည့် သေနတ်လာပြီ
နံရံသို့မဟုတ် တစ်ခုခုနောက်တွင် ပုန်းခို အကာအကွယ် ယူထားသော ရန်သူကိုပင် ထိအောင် ပစ်နိုင်မည့် ရိုင်ဖယ် သေနတ်သစ် အမေရိကန် စစ်တပ် စမ်းသပ်နေသည်။ XM25 သေနတ်ဟု နာမည် ပေးထားသည်။ Orbital ATK လက်နက် သုတေသန လုပ်ငန်းက ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်ကို သတ်မှတ်နိုင်သလို၊ ပစ်မှတ်နေရာ ရောက်သည်နှင့် အလိုလို ကျည်ပေါက်ကွဲမည့်စနစ် ပါဝင်သည်။ ကျည်ဆန်သည် အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ထည့်သွင်းထားသည်။ သတ်မှတ် ပေးထားသော အကွာအဝေးကို ရောက်သည်နှင့် အလိုလို ပေါက်ကွဲ ထွက်နိုင်သဖြင့် နံရံနောက်တွင် ကွယ်ပြီး ပုန်းနေလျှင်ပင် ထိုသူ၏ ဘေးနေရာကို ချိန်ပြီး အကွာအဝေး တွက်ကာ ပစ်လွှတ်လိုက်ပါက ထိုသူ၏ဘေးတွင် ကျည်ပေါက်ကွဲကာ ရန်သူ သေဆုံးမည် ဖြစ်သည်။ ရိုင်ဖယ် ကျည်ဆန်သည် ပေ (၂၃၀၀) ထိ ရောက်နိုင်ရာ သာမန် ရိုင်ဖယ် ကျည်ဆန် အလှမ်းမမီသော နေရာများသို့ပါ ရောက်နိုင်သည်။ ရိုင်ဖယ်သည် အကွာအဝေးတိုင်းသည့် လေဆာစနစ် ပါဝင်သဖြင့် ပစ်မှတ်နှင့် သေနတ် အကွာအဝေးကို အတိအကျ တိုင်းတာနိုင်သည်။ (၂၅) မီလီမီတာ ကျည်ဆန်မျိုး အသုံးပြုထားသည်။ ကျည်ဆန်ထဲတွင် ရေဒီယို အာရုံခံစနစ် ပါဝင်သည်။ ပစ်လွှတ် လိုက်ပြီးသည်နှင့် သေနတ်၏ အကွာအဝေး ထိန်းချုပ်စနစ်က ဖောက်ခွဲရန် အချက်ပေးမှုကို အာရုံခံ နေမည် ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်နေရာ ရောက်၍ ကျည်ဖောက်ဖွဲဖို့ အချက်ပေးမှု ၀င်လာသည်နှင့် ကျည်ကို ဖောက်ခွဲ ထုတ်လိုက်ကာ ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်စေမည် ဖြစ်သည်။Source: Daily Mail
Read 4295 times	ပုံမှန်ထက် ဗလ (၂) ဆ ကောင်းသော ခွေးမျိုး တီထွင်လိုက်ပြီ
တရုတ်နိုင်ငံမှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ပုံမှန်ခွေးထက် ကြွက်သား နှစ်ဆ ပိုသန်မာသော ခွေးမျိုးကို မျိုးဗီဇပြုပြင်ယူကာ မွေးထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အမဲလိုက်ခွေးမျိုးဖြစ်ပြီး ဟာကျူလီနှင့် တိုင်ဂေါင်ဟု အမည် ပေးထားကြောင်း သိရသည်။ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး မျိုးဗီဇ ပြုပြင်မွေးမြူထားသော ခွေးနှစ်ကောင် အဖြစ်လည်း မှတ်တမ်းဝင်သည်။ ကြွက်သား ပိုတောင့်တင်းသဖြင့် အပြေးလည်း နှစ်ဆလောက် ပိုမြန်ကြောင်း သိရသည်။ အချို့သာ ပြိုင်ခွေးမျိုးသည် မျိုးဗီဇဖောက်ပြန် ပေါင်းစပ်မှုမျိုး ဖြစ်ပွားကာ ကြွက်သား ပိုသန်မာပြီး အပြေးလည်း ပိုကောင်းတတ်သော်လည်း ယခုအမဲလိုက် ခွေးနှစ်ကောင်သည်ကား ပထမဆုံးအဖြစ် မျိုးဗီဇကို လိုသလို ပြုပြင်ယူကာ မွေးမြူနိုင်ခဲ့သော ခွေးမျိုးဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည် သန္ဓေသားလောင်း (၆၅) ခုကို မျိုးဗီဇ ပြုပြင်ယူခဲ့ရာ ခွေးကလေး (၂၇) ကောင် မွေးလာသည့် အနက် ယခုနှစ်ကောင်သည်သာ လိုချင်သော အနေအထားသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ကွမ်ကျိုး ဇီဝဆေးပညာသိပ္ပံမှ ပညာရှင်များ စမ်းသပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်လည်း မျိုးဗီဇထုတ်နုတ်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ခြင်းနည်းများဖြင့် စမ်းသပ်သွားရန် ရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ဆေးသိပ္ပံနယ်ပယ်တွင် စမ်းသပ် အသုံးပြုနိုင်ရန် အတွက် ရောဂါပုံစံ တစ်မျိုးစီ ရှိသော ခွေးများကိုလည်း စမ်းသပ် မွေးမြူသွားဖို့ ရှိကြောင်းလည်း သုတေသန အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ လန်ဆူးလိုင်က ပြောသည်။ ''ခွေးတွေဟာ လူတွေနဲ့ အတော်များများမှာ ဆင်တူတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝစနစ်လည်ပတ်ပုံ၊ အာရုံတုံ့ပြန်ပုံနဲ့ ခန္ဓာတည်ဆောက်ပုံ အချို့ဟာ လူတွေနဲ့ ဆင်တူတယ်။ ဒါကြောင့် လိုချင်တဲ့ ရောဂါပုံစံတစ်မျိုးစီရှိတဲ့ ခွေးမျိုးတွေကို မျိုးဗီဇ ပြုပြင်ယူတဲ့နည်းနဲ့ မွေးထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဆေးသိပ္ပံသုတေသနမှာ အသုံးပြုပြီး လူတွေရဲ့ ရောဂါတွေကိုပါ ပျောက်အောင် ကုပေးနိုင်မယ့် ဆေးဝါးမျိုးတွေ ဖော်ထုတ်နိုင်လာမယ်'' ဟု ဒေါက်တာလိုင်က ပြောသည်။ သုတေသီအဖွဲ့သည် ဆက်လက်ပြီး ကြွက်သား သန်မာသည့် ခွေးမျိုးတွေ ထုတ်လုပ်ရန်တော့ မရှိကြောင်း သိရသည်။Source: Daily Mail
Read 4295 times	ဖက်ရှင်ကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ ယွန်းယွန်း
အနုပညာအလုပ်ကို လက်လွှတ်လို့ မရသေးတဲ့ အကယ်ဒမီ ယွန်းယွန်းက ပညာရေးဘက်ကိုလည်း အာရုံစိုက်ထားပြီး၊ ယနေ့ခေတ် ဖက်ရှင်ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ “ညီမက Life အလှကုန် အသစ်အတွက် စင်ကာပူမှာ ကြော်ငြာရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ညီမ အတွက်လည်း ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံပါပဲ။ ညီမအတွက်လည်း အလုပ်လုပ်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ Team work ကလည်း ကောင်းတော့ ဘာမှအခက်အခဲ မရှိခဲ့ပါဘူး။ အလုပ်နဲ့ သွားတာဆိုတော့ တခြားအဝေးကြီးတော့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အဓိကတော့ Shopping ထွက်ခဲ့တာပဲ ရှိပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း ညီမက အရင်ကထက်စာရင်တော့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းတာတို့ ဖက်ရှင်တို့ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။ ဖက်ရှင်ကတော့ ဘယ်လိုပြောမလဲ၊ အကြိုက်ကတော့ ကိုယ်သွားရမယ့် နေရာပေါ် မူတည်ပြီး ခံစားချက်ကလည်း ပြောင်းသွားတယ်။ ပုံသေတော့ မရှိဘူး။ လက်ရှိတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ် ကြော်ငြာရိုက်တယ် ဒီလောက်ပါပဲ။ တစ်ရက်တည်း ပြီးတဲ့အရာဆို ရိုက်တယ်။ ညီမကလည်း လက်ရှိက ပညာရေးကိုလည်း ဖိနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း အနုပညာကိုလည်း လက်လွှတ်မရ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ယွန်းယွန်းက ကြော်ငြာတွေ ဓာတ်ပုံတွေတော့ ကျောင်းအားရက်တွေမှာ လုပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Read 4295 times	၀မ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝ နည်းလမ်းကောင်းများ
၀မ်းချုပ်ခြင်းက လူအများစုမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာ တစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းတွေ ကတော့ ဖိုက်ဘာဓာတ်မရှိခြင်း၊ ရေသောက်သုံးမှု နည်းခြင်း၊ တချို့သော ဆေးဝါးများကို သုံးစွဲခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုခံရခက်တဲ့ ဝေဒနာကို သက်သာစေနိုင်ဖို့ ဘေးကင်း လွယ်ကူတဲ့ သဘာဝ ဆေးနည်းများစွာက ကုသ ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၁။ သံလွင်ဆီစစ်က အရသာရှိတဲ့ အဆီတစ်မျိုး ဖြစ်ရုံသာမက ၀မ်းချုပ်ခြင်းကိုပါ သက်သာစေပါတယ်။ ၎င်းက အစာချေဖျက်မှု စနစ်ကု မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့- မနက်ပိုင်းမှာ သံလွင်ဆီ တစ်ဇွန်း သောက်ပေးပါ။ အစာ မစားရသေးခင် သောက်သုံးရင် ပိုထိရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ အရသာ ပိုကောင်းစေချင်ရင် ရှောက်သီးညှစ်ပြီး သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။(ရှောက်သီးကလည်း ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။) ၂။ လတ်ဆတ်တဲ့ ရှောက်သီး တစ်လုံးက အစာအိမ်ကိုပါ အကျိုးပြုစေနိုင်တယ် ဆိုတာ သိပါသလား။ ရှောက်သီးမှာပါတဲ့ citric acid က အစာချေဖျက်မှုစနစ်ကို လှုံ့ဆော် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၀မ်းတွင်း အပူအပုပ်များ၊ မချေဖျက်နိုင်သော အစာများကိုပါ ကူညီရှင်းထုတ် နိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းကတော့- ရေနွေးတစ်ခွက်ထဲသို့ ရှောက်သီးတစ်လုံးကို ညှစ်ထည့်ပြီး သောက်သုံးပါ။ ၃။ တစ်ခါ တစ်ရံမှာတော့ ကော်ဖီက မိတ်ဆွေကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆိုလိုတာ ကတော့ ကော်ဖီက မွှေးပျံ့လန်းဆန်းစေတဲ့ ရနံ့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ရုံ သာမက ၎င်းမှာပါဝင်တဲ့ ကဖင်းဓာတ်က အစာချေဖျက်ခြင်းကို ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်ခွက် နှစ်ခွက် သောက်ပေးတာက ပြဿနာ မရှိပေမယ့် အလွန်အကျွံ မသောက်မိဖို့တော့ သတိထားသင့်ပါတယ်။ ၄။ သင့်ဝမ်းတွင်းက အစာချေဖျက်မှုကို ပုံမှန်လည်ပတ်စေချင်ရင် သင်ကိုယ်တိုင် ကလည်း ပုံမှန်ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ၀မ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ စပ်ဆက်မှု ရှိမရှိ ဆိုတာကို သိပ္ပံနည်းကျ အတည်မပြု ရသေးသော်လည်း အူမကြီးရဲ့ ကြွက်သားတွေကို ပြေလျော့ပေးတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခု သတိထားရမှာကတော့ ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်းကို အစာစားပြီး တစ်နာရီလောက်ကြာမှသာ လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ၅။ ဖိုက်ဘာဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို များများစားပေးပါ။ ဒီသဘာဝ နည်းလမ်းကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဖိုက်ဘာဓာတ်က ချေဖျက်လို့ မရတဲ့ ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းက ရေမြုပ်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ၎င်းကရေကို အပြည့်အ၀ စုပ်ယူကာ ၀မ်းတွင်းမှာရှိတဲ့ စွန့်ထုတ်ပစ္စည်းတွေကို ပျော့သွားစေပြီး လွယ်ကူစွာ ထွက်စေပါတယ်။ ဖိုက်ဘာဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစား အစာတွေကတော့ ပဲ၊ တရုတ်ဆီးသီး၊ ဂျုံကြမ်းပေါင်မုန့် ၊ ဘယ်ရီသီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဆီးသီး၊ သစ်တော်သီး၊ ပန်းသီး၊ သစ်စေ့၊ အာလူး စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ၆။ ရှားစောင်း လက်ပတ်က အသားအရေလှဖို့ တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ပါဘူး၊ ၀မ်းတွင်း အစာလှည့်ပတ်မှုကိုပါ ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ကနေ ချက်ချင်း ရယူထားတဲ့ အနှစ်က အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထိုအနှစ်က ပြုပြင်ထားတဲ့ ရှားစောင်းလက်ပတ် ဖျော်ရည်ထက် ပါဝင်မှုဓာတ် ပိုများတာကြောင့် နှစ်ဇွန်းထက်ပိုပြီး မသုံးသင့်ပါဘူး။ နည်းလမ်းကတော့- သစ်သီးဖျော်ရည်ထဲမှာ သန့်ရှင်းတဲ့ ရှားစောင်း လက်ပတ်အနှစ် နှစ်ဇွန်းရောစပ်ပြီး မနက်တိုင်း သောက်သုံးပေးပါ။ (သို့) ပြုပြင်ပြီးသား ရှားစောင်း လက်ပတ်ဖျော်ရည် တစ်ခွက်သောက်ပါ။Ref: www.everydayroots.com
Read 4295 times	မိသားစုနှင့် စကားများပြီး ကျုံးအတွင်း ခုန်ချသတ်သေ
မိသားစုနှင့် အဆင်မပြေဘဲ စကားများ ရန်ဖြစ်ပြီး၊ အသက် (၅၅)နှစ်အရွယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦး ကျုံးအတွင်းသို့ ခုန်ချ သတ်သေမှု တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး ထံမှသိရသည်။ နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ နေ့လယ် (၁၂း၃၀) အချိန်တွင် အမျိုးသား တစ်ဦးသည် (၁၂) လမ်းနှင့် (၇၇)လမ်း ထောင့်ရှိ ကျုံးရေထဲသို့ ခုန်ချသွားကြောင်း ဖုန်းဖြင့် သတင်းပေးမှုကြောင့် နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက သက်သေများနှင့် သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ““သူ ကျုံးထဲကို ခုန်ချမှု မလုပ်ခင် (၁၁) နာရီလောက်မှာ အိမ်ကမိသားစုနဲ့ စကား အနည်းငယ်များပြီး ထွက်သွားတယ်လို့ သူ့ မိသားစုက စစ်ဆေးချက်ကို ဖြေကြားတယ်။ အရက်သေစာက နေ့တိုင်းသောက်တဲ့ အတွက် မိသားစုနဲ့ အိမ်တွင်းရေး ပြဿနာ လေးတွေ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ပြင်ပဒဏ်ရာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေတဲ့ သဘောပါပဲ””ဟု မန္တလေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ကျရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ အောင်ပြည်သာ ရပ်ကွက်၊ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်နေ သေဆုံးသွားသူ၏ အလောင်းအား မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ထားပြီး နယ်မြေခံ အမှတ် (၂)ရဲစခန်းမှ သေမှုသေခင်း အမှတ် စဉ် ၆၂/၂၀၁၅ အရ အမှုဖွင့် စစ်ဆေးလျက် ရှိသည်။
Read 4295 times	မျက်လုံးက ပြောသော ကျန်းမာရေး
မျက်လုံးသည် စိတ်တံခါးပေါက် ဆိုတာထက် ပိုသော အဓိပ္ပာယ်များ၊ သက်ရောက်မှုများ ရှိသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကိုယ့်မျက်လုံးကိုယ် ဂရုစိုက်ပါလေ။ မျက်လုံး အနေအထား ပြောင်းလဲမှု သေးသေးလေးများသည် တစ်ကိုယ်လုံး ကျန်းမာရေးကို ညွှန်ပြနိုင်စွမ်းရှိ၏။ မျက်လုံးသည် စိတ်တံခါး ပေါက်သာမက ခန္ဓာကိုယ်၏ တံခါးပေါက်လည်း ဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ရာ ကိုယ့်မျက်လုံးမှာ သံသယဖြစ်စရာ အပြောင်းအလဲလေးတွေ ပေါ်လာပါက ကိုယ်ပြနေကျ ဆရာဝန်ထံ ဆက်သွယ်ကာ အကြံပြု ဆွေးနွေးပါလေ။မျက်ခွံပေါ်မှာ အ၀ါစက်လေးတွေ ပေါ်လာရင်။ အ၀ါစက်လေးများ ပေါ်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကိုလက်စထရောဓာတ် များနေခြင်း ပြယုဂ်ဖြစ်သည်။ ကိုလက်စထရော များနေခြင်းသည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားစေမည့် အဓိက အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်ရာ မျက်ခွံပေါ်မှာ အ၀ါစက်လေးများ တွေ့လာပြီဆိုလျှင် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိလာပြီဟု မျက်လုံးက ကြိုတင် သတိပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန်ထံ ပြသကာ အကြံဉာဏ် တောင်းခံပါ။ နေထိုင် စားသောက်ပုံ ကျန်းမာအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ ဒိန်းမတ် နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း (၁၃၀၀၀) ကို စစ်တမ်း ကောက်ကြည့်သည်။ ပါဝင်သူများ၏ (၄) ရာခိုင်နှုန်းသည် မျက်ခွံပေါ်တွင် အ၀ါစက်လေးများ ပေါ်နေကြောင်း တွေ့ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ အ၀ါစက်လေးများ ပေါ်နေသူများ၏ (၇၀) ရာခိုင်နှုန်းထိသည် သွေးကြောများ မာကြော တောင့်တင်းလာမည့် အလားအလာ ပိုရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ သွေးကြောများ မာကြော တောင့်တင်းလာခြင်းသည် သွေးကြောများထဲတွင် အဆီဓာတ်များ စုပုံ အနည်ထိုင်လာခြင်း ပြယုဂ်ဖြစ်သည်။ ထို (၇၀) ရာခိုင်နှုန်း အနက် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် အ၀ါစက် မရှိသူများနှင့် ယှဉ်လျှင် နောက်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်း ပိုများလာကြကြောင်း တွေ့ရှိထားသည်။မျက်ခွံတွေ ထူအန်းနေရင်။ မျက်ခွံတွေ ထူအန်းနေပြီဆိုလျှင် ကိုယ့်သွေးထဲမှာ ဓာတ်မတဲ့မှု ဖြစ်ပွားနေသည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ဓာတ်မတဲ့မှုကြောင့် သွေးကြောများ ဖောင်းတက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ် ပထမဆုံး ထင်ရှားသည်မှာ မျက်ခွံတွေ ဖောင်းတက် မို့မောက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ မျက်ခွံသည် နူးညံ့သည့် အရေပြားနှင့် သွေးကြောတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အတွက် မျက်ခွံနေရာမှ သွေးကြောများသည် ဦးဆုံး ညိုမည်းဖောင်းတက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ပြီဆိုလျှင် မိမိသည် ဓာတ်မတဲ့သည့် အစားအစာ သို့မဟုတ် သောက်ဆေး၊ လိမ်းဆေးမျိုးနဲ့ ထိတွေ့ထားသလား ပြန်သုံးသပ် ဆင်ခြင်ရမည်။မျက်လုံး ပြူးထွက်လာရင်။ လည်ချောင်းထဲတွင် ရှိသော သိုင်းရွိုက်ဂလင်းသည် ပိုမှန်ထက် ပိုအလုပ်လုပ်ကာ ဟော်မုန်းများ ပိုထွက်ရှိနေလျှင် မျက်လုံးပြူး ထွက်လာတတ်သည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေမျိုးကို ဆေးပညာက အိပ်ဇိုသာမိုဟု ခေါ်ဝေါ်သည်။ အိပ်ဇိုသာမို ဖြစ်ပွားသူများသည် မျက်လုံးပြူးထွက်ခြင်း အပြင် ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာ ကျဆင်းခြင်း၊ စိတ်ဂယောက်ဂယက် ဖြစ်ခြင်း၊ သွေးခုန်နှုန်း မြန်လွန်းခြင်း၊ ကျလွန်းခြင်း စသော ပုံမမှန်မှု ခံစားရခြင်းများလည်း ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ အိပ်ဇိုသာမိုသည် အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များတတ်ကြောင်း သိရသည်။မျက်နက်ကွင်းမှာ အညိုဝိုင်းပေါ်လာရင်။ စာဖတ်သူ၏ မိသားစုသည် နှလုံးရောဂါ သမိုင်းရှိသည် ဆိုပါက မျက်ကြည်လွှာ မျက်နက်ကွင်း တစ်ဝိုက်မှာ အညိုဝိုင်း ပေါ်လာခြင်းသည် သတိထားရမည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပေါ်လာခြင်းသည် သွေးတွင်း ကိုလက်စထရောဓာတ် အလွန်မြင့်နေခြင်း သတိပေးချက် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပေါ်လာခြင်းသည် နှလုံးဖောက်ပြန်နိုင်ခြေ၊ လေဖြတ်နိုင်ခြေ ပိုများလာခြင်းကို ညွှန်းဆိုခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ စားသောက် နေထိုင်မှုပုံစံများကို ကျန်းမာရေးနှင့် လျော်ညီအောင် ဆင်ခြင်ဖို့ အရေးကြီး သတိပေးချက်လည်း ဖြစ်သည်။ သတိထားမိပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း အညိုဝိုင်း ဆက်ရှိနေဦးမည်ဆိုလျှင် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နှင့် ပြသကာ သွေးတွင်း ဖက်တီး အက်စစ်ဓာတ် နှင့် ကိုလက်စထရောဓာတ်ကို စစ်ဆေးကြည့်သင့်သည်။ မျက်နက်ကွင်းမှာ အညိုဝိုင်းပေါ်ခြင်း ဖြစ်စဉ်သည် အသက် (၆၀) အထက်များတွင် ပိုဖြစ်ပွားတတ်သည်။Ref: rdasia.com
Read 4295 times	Friday, October 23, 2015
ကင်ဆာ ပျောက်စေသော ကြက်ဥပြုတ်
လက်တွေ့ သားအိမ်ကင်ဆာဖြင့်ရန်ကုန်ဆေရုံကြီးမှာ စစ်ဆေးပြီးနောက်ကျမှလာသည်ဟုသတ်မှတ်ပြောဆိုခြင်းခံရသူအသက်၅၀ကျော် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး- လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသွားသည်ဆိုသဖြင့် တိုက်ကြီးမြို့အဝင် တာဂွရွာမှသတင်းပျံ့ ပြီးတစ်ဆင့်စကားကြားသိရသဖြင့် ကံတိုက်ဆိုင်သူများပျောက်ကင်းကြစေရန်တင်ပြပါသည်။( ပေးပို့သူ။ ဆရာကြီးဦးသောင်းဌေး။ တာဂွရွာ အလယ်တန်းကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး)ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရသူ။ သင်္ဘောသီး။သင်္ဘောရွက်ကိုနေ့စဉ်သုံးစွဲပါ။ဆေးမီးတိုဆိုပြီးအထင်မသေးပါနှင့်။ အစာဟောင်းအိမ် အူမကြီးမှာကင်ဆာအလုံးတွေ့၍ဖြတ်ထုတ်ရမည့်သူစ်ဦး။ငွေကြေးမတတ်နိုင်၍ဆရာကြီးတစ်ဦးနည်းပေးသဖြင့်သင်္ဘောရွက်ပြုတ်အရည်သောက်ခြင်း။ အရွက်နုကိုတို့စရာလုပ်စားခြင်းဖြင့်မခွဲရပဲ၊ ဝမ်းလည်းပြန်သွားနိုင်ကာ၂နှစ်ကျော်ပြီ။အသက်ရှင်နေပါသည်။သင်္ဘောသီး ကြက်ဥပြုပ်သည်ရေမထည့်ပါ။ သင်္ဘောသီးထဲမှအငွေ့အာနိသင်ဝင်ပြီးကြက်ဥကျက်
သဖြင့်ဈေးကွက်မဝင်ပါ။သင်္ဘောသီးအစိမ်း ထိပ်မှဖြတ်ပါ။အတွင်းမှအစေ့များကိုခြစ်ပါ။ အခေါင်းကျယ်စေဖို့ပါ။ အစေ့များကိုဖယ်မပစ်ပါနှင့်။အခေါင်းတွင်းသို့ကြက်ဥထည့်ပါ။ အလုံးကြီးလျှင်ကြက်ဥ ၂လုံးအထိဆန့်ပါသည်။အဖုံးကိုပြန်အုပ်ပြီးအစေးဖြင့်ဖိကပ်ပါ။ မသေချာလျှင်ရွှံ့ဖြင့်ဇော်မံပါ။မီးဖို။မီးကျီးဖြင့် နာရီဝက်ခန့်ဖုတ်ပါ။ဖွင့်ကြည့်လျှင်သင်္ဘောသီးအတွင်းမှအခိုးများထွက်လာပါလိမ့်မည်။အတွင်းမှကြက်ဥကိုအပြင်ထုတ်ပြီးအအေးခံထားပါ။ကြက်ဥကိုရေမဆေးပါနှင့်။ကြက်ဥ ၂လုံးကို အခြားအစာနှင့်မရောပဲထမင်းလွတ်စားပါ။နေ့စဉ် အနည်းဆုံး ၁၄ ရက်စားမှအကျိုးထူးပါမည်။( ကြောင်းကျိုးတိုက်ဆိုင်သူများ ပျောက်ကင်းကြပါစေ။)ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) ၂၉.၄.၂၀၁၅။
Read 4295 times	အချစ်ကြောင့် ပူဆွေးနေတဲ့ ခေး
MRTV-4 ဇာတ်လမ်းတွဲကနေ သရုပ်ဆောင် တစ်ယောက်အဖြစ် လုပ်ကိုင်လာတဲ့ ခေးဆက်သွင်က Flower & Butterfly2တွင် အချစ်ကြောင့် ပူဆွေးရတဲ့ ကာရိုက်တာနဲ့ သရုပ်ဆောင် ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ““ညီမရဲ Flower & Butterfly ဇာတ်လမ်းတွဲက ညီမရဲ့ ပထမဆုံး ဇာတ်လမ်းတွဲပါ။ အခုထပ်လွှင့်မှာက Flower & Butterfly2ပါ။ ဇာတ်လမ်းက အသစ်ပဲ။ အဲဒါကလေးကတော့ ဟာသချည်းပဲတော့ မဟုတ်ဘူး။ နည်းနည်း ဒရာမာ ချိုးထားတယ်။ ရိုက်ထားတာကတော့ တစ်နှစ်ကျော်ပြီ။ ခပ်သွက်သွက်ကောင်မလေးကနေ အချစ်ကြောင့် အမြဲပူဆွေးသောက ရောက်နေတဲ့ ကောင်မလေးနေရာ သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ နှစ်ယောက်လောက်တော့ လဲထားတယ်။ ကျန်တာတော့ မပြောင်းထားပါဘူး။ဇာတ်လမ်းတွဲတွေ ရိုက်နေတော့ အပြင်က ရိုက်မယ်လို့ ပြောထားတာတွေတောင် ပြတ်သွားပါတယ်။ ရက်က ညှိမရလို့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဇာတ်လမ်း တိုလေးတွေတော့ ရရင်ရသလို ရိုက်တယ်။ ညီမအတွက် အတွေ့အကြုံ လိုချင်လို့ပါ။ ဒါမှလည်း အရည်အသွေးတွေ တိုးတက်လာမယ် ဆိုတော့ အမြဲတမ်းတော့ အားဖြည့်ထားပါတယ်။ တစ်ခုခု အခွင့်အရေးရရင် လုပ်နိုင်အောင်ပါ။ ဒီလောကထဲကို ရောက်လာအောင်လည်း MRTV-2 က လုပ်ပေးခဲ့ တာပါ။ MRTV-2 က ညီမတို့ရဲ့ ကျေးဇူးရှင်ပါ။ ညီမကလည်း ဇာတ်လမ်းတွဲ ဟာသလေးတွေ ရိုက်နေတော့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ပုံစံတွေ မထပ်အောင်လည်း လုပ်သွားမှာပါ”လို့ ပြောပြတယ်။ ခေးဆက်သွင်က မာယာကွန်ရက် CCTV ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလည်း ရိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
Read 4295 times	Older Posts
စုံတွဲများ အမေးအဖြေ(ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ)
၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ 1. ရာသီသွေးဆင်းပြီး (၇) ရက်အတွင်း ကလေးမရနှိင်ဘူး 2. အသက်ငယ်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတာနှင့် Feeling ကွာခြားမှု ရှိပါသလား 3. သ...
အွန်လိုင်း Video Chat ကနေ Sex ကိစ္စများ ချက်သူတွေ အထူးသတိထားဖို့ သင်ခန်းစာပေးသည့် ဗီဒီယို (အရွယ်ရောက်သူတိုင်း ကြည့်သင့်သည်)
Online က Video Chat သမားတွေအတွက် အထူးသတိထားကြပါ။။ ဒီ video ကတော့ပညာပေး video ဖိုင်လေးပါ။။ ဒီ video ဖိုင်လေးကို ကြည့်ပြီး Online မှာ Vid...
ကျွန်တော့်နာမည် အောင်သော် ပါ။ အသက်က ၁၇နှစ် သူငယ်ချင်းတွေက လူပျိုရည်မပျက်သေးတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ဂိုဏ်းဝင်သွားအောင် မင်္ဂလာဈေး JJ အောက်မှာ ......
လိင်မှုကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ(၁) (Only +18)
အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါအတွက် မေးခွန်း-အဖြေတွေကို အချိန်မအားလို့ တင်မပေးနိုင်တာ အတော်ကြာသွားပြီ။ အခုကြိုးစားပြီး ပြန်တင်ပါတယ်။ အမေး...
ထမီရင်လျားလေးနဲ့ ရွှေမှုန်ရတီ ဘာကြောင့်ငို ကဲ ပရိသတ်ကြီး ရွှေမှုန်ရတီတစ်ယောက် ဘာကြောင့် ငိုသွားသလဲ ဘယ်သူသိကြပါသလဲ။ ရာဇာနေ၀င်းကြောင့်လား။ ဒါမှမဟုတ်ရေကြောက်လို့လား။ ဘာကြောင့်လဲတော့မ...
လှချင်သူများ သတိထားရမည့် ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခု
အေသင်အောင် တရုတ် နိုင်ငံ၊ ဂန်ဆူ ပြည်နယ် မှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်က မျက်နှာကို လှပဖို့ ဆေး...
သရုပ်ဆောင် သူထူးစံ၊ ခွန်းဆင့်နေခြည်တို့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ မိုင်တိုင် ၂၆ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အမေရိကားမှာ သွ...
မေတ္တာတွေ ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ လမင်းအိနြေ္ဒ
အကယ်ဒမီ ဗန်းကိုင်ကနေ အနုပညာ လောကထဲကို ခြေချခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်သစ် လမင်းအိနြေ္ဒက သူမအတွက် သရုပ်ဆောင် န၀ရတ်ဆီကနေ ညီအစ်မ မေတ္တာတွေ ရခဲ့တယ...
ဆက်ဆံရာမှာ အပြီးမြန်တဲ့ ယောင်္ကျားလေးများဖတ်ရန်(ဆေးစာ)
မေး။ ။ကျွန်တော့် အသက်က အခု ၂၅ နှစ်ပါ။ သုက်လွှတ် အရမ်းမြန်ပါတယ်။ သုက်လွှတ်စောခြင်းကို ဖတ်ပြီးပါပြီ။ လိင် ဆက်ဆံတာ တစ်ခါလည်း မကတော့ပါဘူး။ မရေတ...
သိရှိမှတ်သားဖွယ် HIV/AIDS ရောဂါလက္ခဏာများ (အမေးအဖြေ)
မေး။ ။ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်နေတဲ့ သူရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေပါလဲ။ ဖြေ။ ။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုး ကူးစက်ခံရပြီသူ ၆၀%-၈၀% ဟာ ၅ နှစ်မှ ၁၀ န...
သေနိုင်လောက်သည့် အခြေအနေမှာ အသက်မသေခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ် ...
သရုပ်ဆောင်မှုနဲ့ အသားကျလာပြီ ပြောတဲ့ ရတနာဗို
နှုတ်ခမ်းချင်းအနမ်းပေးသူများကြုံနိုင်သည့် အာဘွား ဘက...
လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှု မျိုးဗီဇနှင့် ဆိုင်ပါတယ်တဲ့
လိင်အသားပေး စာအုပ်ကို ကလေးတွေအတွက် သင်ရိုးညွှန်းတမ်...
ဇနီးတွေသက်ရှည် ကျန်းမာဖို့ ခင်ပွန်းတွေက ဥပုသ်စောင်...
မော်ဒယ်တွေကို ဘီကီနီ ၀တ်ခိုင်းပြီး စားပွဲထိုးခိုင်...
နှလုံး အပြင်ဘက် ရောက်နေတဲ့ ကောင်မလေး
နံရံနောက်ပုန်းနေလည်း ထိအောင် ပစ်နိုင်သည့် သေနတ်လြာ...
ပုံမှန်ထက် ဗလ (၂) ဆ ကောင်းသော ခွေးမျိုး တီထွင်လိုက...
ဖက်ရှင်ကို စိတ်ဝင်စားလာတဲ့ ယွန်းယွန်း
၀မ်းချုပ်ခြင်းကို သက်သာစေမယ့် သဘာဝ နည်းလမ်းကောင်းမ...
မိသားစုနှင့် စကားများပြီး ကျုံးအတွင်း ခုန်ချသတ်သေ
မျက်လုံးက ပြောသော ကျန်းမာရေး
Copyright © 2011 New Myanmar News | Powered by Blogger